PEACEFUL PA: March 2011
1. THE UNCHANGING CHRIST
၁။ မပြောင်းလဲသော ခရစ်တော်
၂၀၁၁၊ မတ်လ ၁၃၊ တနင်္ဂနွေ ညနေ
"ယေရှုခရစ်သည် မနေ့၊ယနေ့၊နောင်ကာလ အစဉ်အမြဲ မပြောင်းလဲ နေတော်မူ၏။" (ဟေဗြဲ ၁၃း၈)
အသက် ၇၀ ပြည့်ခါနီးပါပြီ။ ဆယ်စုနှစ်၊ ခုနှစ်စုကို ပြန်ကြည့်တော့ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အဝတ်အစား ခပ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ လူတယောက် မြင်းရထားစီးပြီး၊ ပြန်သုံးလို့ရမယ့် ပစ္စည်းအဟောင်းတွေ ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ လာကောက်တာ သတိရတယ်။ မြင်းခွါသံကြားရတယ်။ လမ်းထဲရောက်လာရင် ထူးထူးခြားခြား အသံပေးတတ်တယ်။ ရေခဲမုန့်ရောင်းတဲ့ မြင်းလှည်းလည်း လာတတ်တယ်။ ရေခဲစတွေကို ပြေးကောက်လို့ ရလောက်အောင် မြင်းက ဖြည်းဖြည်းပဲသွားတယ်။ အဲဒါ Los Angeles မြို့ထဲမှာပါ။ ရေခဲသေတ္တာတွေ သိပ်မရှိသေးတော့ ရေခဲတုံးတွေ ဝယ်ကြရတယ်။ ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ ရေခဲသေတ္တာမရှိဘူး။ ရေခဲဘူးပဲရှိတယ်။ အပေါ်အကန့်မှာ နွားနို့ထည့်ပြီး။ အောက်အကန့်မှာ တခြားပစ္စည်းတွေ ထည့်ပါတယ်။ အခုထိလည်း ကျွန်တော်ကတော့ ရေခဲဗူး Ice Box လို့ပဲ နှုတ်ကျိုးနေပါတယ်။ တခြားကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲတခုကတော့ ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်လာတာပါပဲ။ ငယ်ငယ်က ရေဒီယိုမှာ Jack Benny, Amos နဲ့ Andy၊ Fibber McGee နဲ့ Molly၊ Edgar Bergen နဲ့ Charlie McCarthy၊ The Green Hornet၊ Inner Sanctum၊ နဲ့ The Lone Ranger လို အစီအစဉ်တွေ ကြိုက်ပါတယ်။ TV အကြောင်းကြားရခါစတုန်းက လေလှိုင်းမှာ စကားပြောနေတဲ့လူကို မြင်ရဖို့ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်ပဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့တာပါ။ "လူရုပ်က အင်တာနာကတဆင့် TV ဖန်သားပြင်ကို ဘယ်လိုဆင်းလာမလဲလို့ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကလေးဆိုတော့ နားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ TV စမြင်ဖူးတာက တဖက်အိမ်က ငှါးပြီးကြည့်ရတုန်းကပါ။ မိနစ်၃၀ တိုင်းတခါ ပိုက်ဆံထည့်ကြည့်ရတယ်။ ဖန်ပြင်က အလျား ၂လက်မ၊ အနံ၁လက်မရှိပါတယ်။ ရှေ့မှာ မှန်ဘီလူးတပ်လိုက်တော့ အလျား ၆လက်မ၊ အနံ ၄လက်မ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ၁၉၄၇ တုန်းကပါ။ တော်တော်စွဲလန်းသွားတယ်။ ကောဇောပျံစီးတဲ့ " Arabian Nights" ဇာတ်လမ်းကို မိနစ်၃၀ လောက် ကြည့်ဖူးပါတယ်။ အိမ်ကကော်ဇောပေါ်မှာတက်ထိုင်၊ ပျံဖို့ကြိုးစားကြည့်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် ထမပျံဘူး။ တော်တော်ခက်တယ်။
သမ္မတ Franklin D. Roosevelt ၁၉၄၅ မှာသေတာ သတိရတယ်။ ၁၉၄၈ မှာ မဟတ္တမ ဂန္ဒီ လုပ်ကြံခံရတာမှတ်မိတယ်။ ၁၉၄၈ မှာပဲ Harry Truman က Tom Dewey ကို အပြတ်အသတ်နိုင်ပြီး သမ္မတဖြစ်တာ သတိရတယ်။ "Truman နိုင်တယ်" လို့ အိမ်ဘေးက အဒေါ်ကြီးကို ပြေးပြောတယ်။ သူက ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျပြီး၊ ဝမ်းနည်းတဲ့ အသံနဲ့ "တို့က Dewey ကို ထောက်ခံတာ" လို့ ပြောတယ်။ စိတ်ထဲမှာ " မဟုတ်သေးပါဘူး၊ သူက ရီပတ်ပလီကင်ပါ" လို့ တွေးမိတယ်။ သူကို အရင်လို ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ နောက်ထပ် နားလည်မလွဲတော့ဘူး။ Adam အထိ တောက်လျှောက် ဒီမိုကရက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ် ဒေါက်ကလပ်၊ မက်အာသာကို သတိရတယ်။ ဘုရင်မ အဲလိဇဘက်ရဲ့ နန်းတက်ပွဲကို TV မှာ မြင်ဖူးပါတယ်။ ၁၉၅၂တုန်းက ကနေဒါပြည်၊ တိုရန်တိုမြို့လမ်းမတခုမှာ ရပ်နေတုန်း စတိုးဆိုင် တဆိုင်ရဲ့ ပြတင်းပေါက်ကနေ မြင်ခဲ့ရတာပါ။ Adlai Stevenson ၊ Hank Williams ၊ Ernest Hemingway ၊ John Steinbeck ၊ "Catcher in the Rye" တွေကို သတိရပါတယ်။ Johnny Bond, Bob Wills, Merle Travis, Tex Ritter တို့နဲ့ တွေ့ဆုံဖူးတာ သတိရပါတယ်။ Johnny Cash, Elvis, Marilyn Monroe တို့ကို သတိရပါတယ်။ Groucho Marx, Bob Hope, Milton Berle, Red Skelton, Jackie Gleason နဲ့ Art Carney ၊ ပြီးတော့ Steve Allen က Tonight Show ကို ဦးဆောင်တာ သတိရပါတယ်။ နောက် Jack Paar က Tonight Show ကို ဦးဆောင်တာ သတိရတယ်။ John F. Kennedy, Beatles, the Doors၊ ပြီးတော့ Johnny Carson က Tonight Show ကို ဦးဆောင်တာ သတိရတယ်။ Selma, Alabama မှာာလုပ်တဲ့ Dr. King ရဲ့ ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲကို သတိရတယ်။ ခရူးရှော့ဖ် နဲ့ ဆိုဗီယက်တို့ရဲ့ Sputnik ယာဉ်၊ အာကာသပြိုင်ပွဲကို သတိရတယ်။ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအတွင်းမှာ ကောလိပ်ကျောင်ဝိုင်းတွေထဲက အကြမ်းဖက်မှုတွေကို သတိရတယ်။ Kent State ကို သတိရတယ်။ Churchill သေတဲ့နေ့ကို သတိရတယ်။ Bobby Kennedy သေနတ်ပစ်ခံရတဲ့ည၊ Dr. King အသတ်ခံရတဲ့နေ့တွေကို သတိရတယ်။ ၁၉၆၈ ရှီကာဂို၊ ဒီမိုကရက်ပါတီ ညီလာခံမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်တာ သတိရတယ်။ Flower Children နဲ့ Jesus People တွေကို သတိရတယ်။ Jews for Jesus နဲ့ ကျွန်တော် မိတ်ဆွေ Moishe Rosen (ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာပွဲကို ကျင်းပပေးပြီး၊ ၂၀၁၀ ခု၊ သူမသေခင်ကလေးမှာ လာလည်သွားသေးပါတယ်။)
Neil Armstrong က လပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တယ်။ သမ္မတ Nixon တရုတ်ပြည်ကိုသွားပြီး ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲသွားတာ သတိရတယ်။ Alec Guinness, Laurence Olivier, Boris Karloff, Ingrid Bergman, Humphrey Bogart, John Wayne, Jimmy Stewart တို့ကို သတိရတယ်။ ၁၉၉၉ ခု၊ Staples Center မှာ Lakers တွေ ပွဲဦးထွက် ကစားတော့ အားကစားအစီအစဉ် ကြော်ညာတဲ့ Chick Hearn ကို သတိရတယ်။ Dustin Hoffman, Ringo Starr, Robert Ryan တို့နဲ့ တွေ့ဖူးတယ်။ Diane Keaton - ကတော့ တနင်္ဂနွေတနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ ဘုရားကျောင်းကိုလာပြီးတော့ တရားဟောတာလာ နားထောင်သွားတယ်။ တနင်္ဂနွေညနေမှာ ဘုရားကျောင်းလာတက်သွားတဲ့ David Soul (Starsky and Hutch) ကို သတိရတယ်။ Hollywood နဲ့ Vine ထောင့်မှာ တရားဟောပွဲတွေလုပ်တော့ Mickey Rooney က ပြတင်းပေါက်ကနေ တရားဟောတာ နားထောင်တာကို သတိရတယ်။ ဘေ့စ်ဘော နာမည်ကျော် Lenny Dykstra ဟာ ညနေဖက် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပွဲကို ၂ ခါ လာတက်တာမှတ်မိတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ မိတ်ဆွေတွေဟာ Stan Laurel (Laurel နဲ့ Hardy ဟာသအဖွဲ့) ကို Santa Monica ကမ်းခြေက သူ့အခန်းမှာ တွေ့ခဲ့ကြတာ အမှတ်ရတယ်။ Warren Beatty နဲ့ Jack Nicholson ကို တွေ့ဖူးတာ သတိရတယ်။ ဒီလို အဆိုတော်တွေကို တွေ့ဖူးတာ အံသြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တသက်လုံးနီပါး နေခဲ့ဖူးတဲ့ Los Angeles မြို့လည်ခေါင်ဟာ Hollywood နဲ့ ၁၅ မိနစ်ပဲ ဝေးပါတယ်။
သမ္မတ Nixon နဲ့ နေ့လည်စာ စားဖူးတယ်။ သမ္မတ Reagan နဲ့ နှစ်ခါတွေ့ဖူးတယ်။ သမ္မတရဲ့ မိန့်ခွန်းရေးရတဲ့ Paul Buchanan နဲ့ McLean, Virginia က သူ့အိမ်မှာ ကော်ဖီသောက်ဖူးတာ သတိရတယ်။ အဲဒီမှာ အစ္စရေးကို ထောက်ပံ့ဖို့ပြောပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ဖူး။ သမ္မတဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mike Huckabee နဲ့ တွေ့ဖူးတာ သတိရတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၊ စစ်အေးစစ်၊ ကိုရီးယားစစ်၊ ဗီယက်နမ်စစ်၊ 9/11, အီရတ်စစ်နဲ့ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ကျဆုံခန်းတွေကို အမှတ်ရတယ်။ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ Dr. John S. Waldrip က ကျွန်တော်တွေ့ဖူး၊ ရင်းနှီးဖူးတဲ့ တရားဟောဆရာတွေ၊ ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်တွေ စာရင်းကို မကြာခဏ တောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ စာရင်းရှည်တော့ စိတ်ရှုတ်စရာပါတယ်။ "ငါ့လို ဒီမြို့က တရားဟောဆရာလေးအဖို့ ဒီလောက်များတဲ့ ကမ္ဘာကျော် တရားဟောဆရာတွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေကို ဘယ်လိုများ တွေ့ခဲ့ပါလိမ့်" လို့ စိတ်ထဲတွေးမိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ စာရင်းပြုစုလိုက်ပါပြီ။ အစီအစဉ်မကျပေမယ့် မှတ်မိသလောက်ပေါ့။ သင်းအုပ်ဆရာ Richard Wurmbrand တို့ ဇနီးမောင်နှံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဇနီးမောင်နှံ ညစာစားတာ မှတ်မိပါတယ်။ Billy Graham, George Beverly Shea တို့နဲ့တွေ့ဖူးပါတယ်။ Dr. W.A. Criswell နဲ့က နှစ်ကြိမ်ပါ။ Dr. John R. Rice ကို အင်တာဗျူး လုပ်ဖူးပါတယ်။ Francis Schaeffer နဲ့ သူ့အခန်းမှာ ကော်ဖီသောက်ဖူးပါတယ်။ သမ္မတ ရော်နယ်ရေဂင် ကျမ်းသစ္စာဆိုတာကို ကြည့်ကြရင်းနဲ့ပါ။ အိမ်မှာ မိတ်ဆွေ Dr. Bob Jones, Jr; နဲ့ ညစာ ခဏခဏ စားဖူးပါတယ်။ Dr. Bob Jones III အိမ်မှာ လာတည်းတဲ့ညကို သတိရတယ်။ Jerry Falwell နဲ့ နေ့လည်စာ နှစ်ကြိမ်စားဖူးတာသတိရပါတယ်။ Christianity Today ရဲ့ ဒုတိယမြောက် အယ်ဒီတာ Dr. Harold Lindsell က ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာပွဲမှာ တရားဟောပါတယ်။ Dr. Paige Patterson က ဘုရားကျောင်းမှာ တရားလာဟောပါတယ်။ Dr. J. Vernon McGee, Dr. Charles L. Feinberg, Dr. Samuel Sutherland, Dr. Gleason Archer, Dr. Wilbur M. Smith, Dr. Walter Martin, နဲ့ (the Banner of Truth Trust) က Rev. Iain H. Murray တို့နဲ့ တွေ့ခဲ့တဲ့နေ့ကို သတိရပါတယ်။ Dr. Harold Lindsell နဲ့ မိတ်ဆွေ , the Southern Baptist Journal ထုတ်ဝေသူ Dr. Bill Powell တို့နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့နေ့ကို သတိရပါတယ်။ Dr. John F. Walvoord, တရားသူကြီး Paul Pressler, Dr.James Montgomery Boice တို့ ဘုရားကျောင်းမှာ တရားလာဟောဖူးပါတယ်။ Dr. R. G. Lee, Dr. E. V. Hill, Dr. Lloys Vess, Dr. Henry M. Morris, Dr. Raymond barber, Hal Lindsey, Dr. Norman Geisler, Dr. George Eldon Ladd, Dr. Bailey Smith, Dr. Phil Shuler, Dr. Neal Weaver, Dr. John Warwick Montgomery, Dr. Bill Monroe, Dr. Gary Grey, Dr. Ken Connolly, Dr. Johnny pope, ကိုယ်ဝန်မဖျက်ချရေးခေါင်းဆောင် Joseph M. Scheidler, Campus Crusade for Christ အဖွဲ့တည်ထောင်သူ Dr. Bill Bright နဲ့ နှစ်ကြိမ်၊ Christianity Today ရဲ့ ပထမမြောက် အယ်ဒီတာ Dr. Carl F. H. Henry တို့နဲပတွေ့တာ သတိရမိပါတယ်။ Dr. G. Beauchamp Vick, Dr. John Rawlings, Dr. Kenneth E. Gillming, Dr. Jack Hyles, Dr. H. L. Willmington, Dr. D. A.
Waite, Dr. Bob Ross, Dr. E. Robert Jordan, Dr. Ian R. K. Paisley, Dr.
David O. Beale, Dr. Lee Roberson, Dr. James O. Combs, Dr. Clarence
Sexton, Dr. Robert L. Sumner, Dr. David Innes, Dr. Louis T. Talbot ရဲ့ ဇနီး, Billy Graham ရဲ့ဇနီး Ruth တို့နဲ့တွေ့ဖူးတာ သတိရပါတယ်။ တရုပ်ပြည်သာသနာပြု Miss Gladys Aylward နဲ့ ထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့ China Evangelical Seminary ကျောင်းအုပ် Dr. James Hudson Taylor III တို့ကိုတွေ့ဖူးပါတယ်။ The First Chinese Baptist Church of Los Angeles မှာ ကျွန်တော်ကို Dr. Timothy Lin က လက်တင်ပေးတာ မှတ်မိပါတယ်။ အဖွါးဆုံးတာ၊ သူငယ်ချင်းဆုံးတာ၊ အဖေဆုံးတာ၊ ကျွန်တော့် ပထွေး Bill McDonell ဆုံးတာ၊ အမေဆုံးတာ၊ ကျွန်တော့်သင်းအုပ် Dr. Timothy Lin ဆုံးတာ သတိရပါတယ်။ Ileana နဲ့ လက်ထပ်တာ၊ သားတွေမွေးတာ၊ အသင်းတော်စတင်တာ၊ အဲဒီအချိန်မှာ လက်တွဲခဲ့ကြတဲ့ သစ္စာရှိသူတွေကို သတိရတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အသက် ၇၀ ရောက်ရင် မှတ်မိကြမှာပါ။
ဧဝံဂေလိ ခရစ်ယာန်တွေမှာ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ခဲ့တာ တွေ့ရတယ်။ ၁၃ နှစ်သားအရွယ်မှာ တဖက်အိမ်က Dr. MGowan ဇနီးမောင်နှံက နှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်းကို ခေါ်သွားတာ သတိရတယ်။ ၅၇ နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပါပြီ။ အသင်းတော်တွေဟာ အပြင်ပန်းအားဖြင့်တော့ အရင်ကထက် အားကြီးလာပုံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ဝထ္တုပိုင်းမှာ လွန်ကဲလာတာက အရင်ကထက် ဆိုးတယ်။ မပြောင်းလဲပဲ လူတွေ ဘုရားကျောင်းထဲရောက်လာတယ်။ အပြင်ဟန်က အားကြီးလာပုံရပေမယ့်၊ အတွင်းက အားနည်းလာတယ်။ ဘုရားကျောင်းတွေ ပိတ်သွားတယ်။ အားလျှော့လာတာ၊ အသက်ငင်နေတာတွေ ရှိလာတယ်။ မဟန်တော့ဘူးလို့ ထင်လာရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့ လမ်းလွဲနေတာတွေက ကျမ်းစာမှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ပြနေတယ်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွေမှာ ကွန့်တာတွေထက်ပိုလာတယ်။ ( Iain
H. Murray, Lloyd-Jones: Messenger of Grace, The Banner of Truth Trust,
2008, p. 90) မှာကြည့်ပါ။ ခေတ်ကာလ ပြောင်းလဲလာတွေက မပြောင်းလဲတဲ့ ခရစ်တော်ကို လိုနေပြီဆိုတာ ပြနေတယ်။
Henry F. Lyte ကပြောတယ်၊
"အဆုံးတိုင်အောင်၊ အသက်တာ ဆုတ်လျှော့သည်
ဤလောက၌ အနိစ္စသာ ထင်ရှား၊
အမြဲတည်ရှင်၊ ကြွလာ၊ နေတော်မူပါ။"
("Abide With Me" by Henry F. Lyte, 1793-1847).
"ဤလောက၌ အနိစ္စသာ ထင်ရှား၊" ဆိုတဲ့ စကားဟာ လူငယ်တွေအတွက်လည်း မှန်ပါတယ်။
တလောတုန်းက ၁၄နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ ဘဏ်မှာ ဆုံရတယ်။ အသားဖြူဖြူ။ ကျစ်ဆံမီး ဆံပင်၊် နားနဲ့ နှာခေါင်းမှာ ကွင်းတွေနဲ့။ စကားပြောကြတဲ့အခါ၊ "အကုန်လုံး ပျက်စီးပြီ။ ဘာမှမကျန်တော့ဘူး။" လို့ ပြောလာတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီလို အပြောင်းအလဲတွေကြားထဲမှာ အသင်းတော်က မပြောင်းလဲပဲနေဖို့ လိုတယ်။ ကျမ်းစာက - "ဘုရားသခင်သည်၊ - ယေရှုခရစ်အားဖြင့် အသင်းတော်၌ ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ - အာမင်။" (ဧဖက် ၃း၂၁)
သားတော်နဲ့ ဝိညာဉ်တော် ဘုရား၊
ရှေး၊ ယခု၊ နောင်ကာလ အဆုံးမရှိ
ဘုန်းကြီးစေမူပါ။ အာမင်၊ အာမင်။"
("The Gloria Patri," an old Scottish chant, author unknown).
ခရစ်ယာန်တိုင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ပါပဲ။ အသက်တာ၊ အတွေကအာကြုံ ၊ ဆုတောင်းရာ၊ သီချင်းဆိုရာမှာ ဘုန်းတော်ထင်ရှားရပါမယ်။ "ဆာလံ ၅း၁၉) ဒါပေမယ့် ခေတ်ပေါ် Junk သီချင်းတွေတော့ မဖြစ်ရဘူးပေါ့။
ဒုတိယတာဝန်က ဧဝံဂေလိ။ "ယေရှုခရစ်သည် မနေ့၊ယနေ့၊နောင်ကာလ အစဉ်အမြဲ မပြောင်းလဲ နေတော်မူ၏။" (ဟေဗြဲ ၁၃း၈) ဆိုတဲ့အကြောင်းကို လောကီသားတွေကို ပြောပြရမယ်။ သခင်ယေရှု ခဏခဏမှာတဲ့ စကားပါ။
"သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျက်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ နာမ၌ နှစ်ခြင်းပေးကြလော့။" (မဿဲ ၂၈း၁၉)
"သင်တို့သည် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှသို့ သွား၍၊ ဝေနေယျသတ္တဝါအပေါင်းတို့အား ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြလော့။" (မာကု ၁၆း၁၅)
"ခရစ်တော်၏အခွင့်အားဖြင့် နောင်တနှင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းတရားကို ယေရုရှလင်မြို့မှစသော လူမျိုးတကာတို့အား ပြောရမည်။" (လုကာ ၂၄း၄၇)
"ခမည်းတော်သည် င့ါကိုစေလွှတ်တော်မူသည့်နည်းတူ၊ သင်တို့ကို ငါစေလွှတ်သည်။" (ယောဟန် ၂၀း၂၁)
"ယေရုရှလင်မြို့မှစသော ယုဒပြည်၊ ရှမာရိပြည်၊ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ငါ၏သက်သေ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။" (တမန် ၁း၈)
"ဧဝံဂေလိ" ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ထရပ်ပြီး၊ ဆိုကြပါစို့။ သီချင်းနံပါတ် ၈ ပါ။
"ဒီကာလအတွက် တပ်လှန့်စကားပေးပါ၊ စိတ်တက်ကြွဖွယ် တန်ခိုးပါ စကား၊
သေမလား၊ အောင်မလားဆိုတဲ့ တိုက်ပွဲခေါ်သံ၊
အသင်းတော် ငြိမ်နေရာက သခင့်တောင်းဆိုသံကြား နိုးထမယ့်စကား၊
ဗိုလ်ခြေတို့ ထကြ၊ တပ်လှန့်စကား၊ ဧဝံဂေလိ"
"ဝမ်းမြေက်ဖွယ် ဧဝံဂေလိ ပြောပါ၊ မြေကြီးစွန်းတိုင် သခင်ယေရှုနာမ။
ကောင်းကင်မှာ စကားသံလွင့်ပျံ၊ ဧဝံဂေလိ၊ ဧဝံဂေလိ။
သေကြေ၊ လဲကျ လူသားတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းလက်ဆောင် ပေးပါ။
အမှောင်မှာ နေတဲ့ လောကီသားတွေအတွက် ဧဝံဂေလိ၊ ဧဝံဂေလိ။"
("Evangelize! Evangelize!" Words by Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986;
sung to the tune of "And Can It Be?" by Charles Wesley, 1707-1788).
"သခင်က မြို့ပြင်၊ လမ်းမ၊ ခြံနားသို့ သွားဦးလော့။ ငါ့အိမ်ကို ပြည့်စေခြင်းငှါ အနိုင့်အထက် ခေါ်သွင်းလော့။" (လုကာ ၁၄း၂၃)
စနေနေ့ ညနေ ၆း၀၀ နာရီ ဧဝံဂေလိလုပ်ကြစို့။ တခြားအသင်းတော်တွေလည်း လိုက်လုပ်လာလိမ့်မယ်။ မလုပ်ပဲ အိပ်ပျော်နေရင်လည်း၊ သခင်ယေရှုကတော့-
"သခင်က မြို့ပြင်၊ လမ်းမ၊ ခြံနားသို့ သွားဦးလော့။ ငါ့အိမ်ကို ပြည့်စေခြင်းငှါ အနိုင့်အထက် ခေါ်သွင်းလော့။" (လုကာ ၁၄း၂၃) ဒါ၊ အသင်းတော်ရဲ့ မပြောင်းလဲတဲ့ တာဝန်ပါပဲ။
နောက်ဆုံးတချက်က လောကအပြောင်းအလဲ၊ ကိုယ့်ဘဝအပြောင်းအလဲ၊ အသင်းတော် အပြောင်းအလဲတွေကြားထဲမှာ သခင်ယေရှု မပြောင်းလဲတာပြောပြချင်ပါတယ်။ "ယေရှုခရစ်သည် မနေ့၊ယနေ့၊နောင်ကာလ အစဉ်အမြဲ မပြောင်းလဲ နေတော် မူ၏။" (ဟေဗြဲ ၁၃း၈) ဧဝံဂေလိကို သစ္စာရှိရှိလုပ်သူတွေကို "ငါသည်လည်း ကပ်ကမ္ဘာကုန်သည့်တိုင်အောင် သင်တို့နှင့် အတူ အစဉ်မပြတ်ရှိသည်။" (မဿဲ ၂၈း၂၀) "ငါသည် သင့်ကို မစွန့်၊ သင့်ကို အလျင်းပစ်၍ မထား။"(ဟေဗြဲ ၁၃း၅) ဘယ်တော့မှ စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့။ ခရစ်တော်အတူရှိတယ်။
မပြောင်းလဲတဲ့ ခရစ်တော်၊ သုံးပါးတဆူမှာ ဒုတိယပုဂ္ဂိလ်။ မပြောင်းလဲတဲ့ ခရစ်တော်ဟာ "ငါတို့အပြစ်များကို ကိုယ်တော်တိုင် သစ်တိုင်မှာ ခံတော်မူပြီ။" (၁ပေ ၂း၂၄) သူရဲ့ မပြောင်းလဲတဲ့ အသွေးတော်က "ငါတို့ အပြစ်ရှိသမျှကို ဆေးကြောတော်မူ၏" (၁ယော ၁း၇) အသေခံတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပဲ အသက်ပြန်ရှင်ပြီး၊ ကောင်းကင်မှာနေတော်မူတယ်။ (လုကာ ၂၄း၃၈-၄၀) မပြောင်းလဲတဲ့ ခရစ်တော်က ဆုတောင်းပေးနေတယ်။ "ကာလအစဉ် အသက်ရှင်သောကြောင့် --- ကယ်တင်ခြင်းငှါတတ်နိုင်တော်မူ၏" "ယေရှုခရစ်သည် မနေ့၊ယနေ့၊နောင်ကာလ အစဉ်အမြဲ မပြောင်းလဲ နေတော်မူ၏။" (ဟေဗြဲ ၁၃း၈)
ခရစ်တော်က မပြောင်းလဲဘူး။ အပြစ်သားတွေကို ချစ်နေဆဲပဲ။ ကယ်တင်ခြင်းမရသေးရင် မပြောင်းလဲတဲ့ ခရစ်တော်ထံ ဒီညပဲ လာပါ။ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာပါ။ အပြစ်တွေကို သူ့အသွေးနဲ့ ဆေးပေးပါမယ်။ဖြောင့်မတ်တဲ့ ဝတ်လုံကို ဆင်ပေးမယ်။ အပြစ်စီရင်မခံရအောင် ကယ်မယ်။ ထာဝရအသက်ပေးမယ်။ ခရစ်တော်ထံ လာပါ။ ခရစ်တော်ထံ လာဖို့ ဘုရားသခင်နဲ့ ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တန်ခိုးက ဆွဲဆောင်ပါစေ။ အာမင်။ Sermon by Dr. R. L. Hymers (Translated by pastor Htein Win Ei on March, 2011)
Posted by Papa at 9:45 PM